ပွောငျး ဂျပန်ယန်းငွေ သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ
ကုလသမဂ္ဂလဲလှယ်မှုနှုန်း data တွေကိုမှာ 06/07/2022 11:20
ဂျပန်ယန်းငွေ သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ပွောငျး ။ ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် မြန်မာကျပ်ငွေ အတွက် ဂျပန်ယန်းငွေ စျေးနှုန်းယနေ့။
1 ဂျပန်ယန်းငွေ = 13.68 မြန်မာကျပ်ငွေ
မြန်မာကျပ်ငွေ ရန် ဂျပန်ယန်းငွေ ၏ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေးတစ်နေ့တစ်ကြိမ် update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပိုက်ဆံလဲလှယ်စစ်ဆင်ရေးဘဏ်များ၌ပြစ်မှားမိနေကြသည်။ ငွေလဲနှုန်းအပေါ်ပြန်ကြားရေးရည်ညွှန်းသည်။ 1 ဂျပန်ယန်းငွေ ယခု 13.68 မြန်မာကျပ်ငွေ ညီမျှ။ 1 ဂျပန်ယန်းငွေ0မြန်မာကျပ်ငွေ အားဖြင့်ထ။ အဆိုပါ ဂျပန်ယန်းငွေ နှုန်းမှာရာခိုင်နှုန်း point ရဲ့0ရာစေ့သောအားဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ဆန့်ကျင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း ဂျပန်ယန်းငွေ သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ
ခြောက်လအကြာ, ဂျပန်ယန်းငွေ 15.21 မြန်မာကျပ်ငွေ ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ဂျပန်ယန်းငွေ 14.94 မြန်မာကျပ်ငွေ ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က, ဂျပန်ယန်းငွေ 13.91 မြန်မာကျပ်ငွေ များအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။ ဤတွင်ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်ငွေလဲနှုန်းတစ်ဇယားကိုပြသနေသည်။ လကျော်, ဂျပန်ယန်းငွေ -2.3% ဖြင့်ပြောင်းလဲ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲနှုန်းရန်။ တစ်နှစ်လျှင် -8.43% - ဂျပန်ယန်းငွေ များ၏ငွေလဲနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှု။
ငွေကြေး ပွောငျး ဂျပန်ယန်းငွေ မြန်မာကျပ်ငွေ
ဂျပန်ယန်းငွေ (JPY) သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK)
1 ဂျပန်ယန်းငွေ 13.68 မြန်မာကျပ်ငွေ
5 ဂျပန်ယန်းငွေ 68.41 မြန်မာကျပ်ငွေ
10 ဂျပန်ယန်းငွေ 136.82 မြန်မာကျပ်ငွေ
25 ဂျပန်ယန်းငွေ 342.05 မြန်မာကျပ်ငွေ
50 ဂျပန်ယန်းငွေ 684.10 မြန်မာကျပ်ငွေ
100 ဂျပန်ယန်းငွေ 1 368.21 မြန်မာကျပ်ငွေ
250 ဂျပန်ယန်းငွေ3420.52 မြန်မာကျပ်ငွေ
500 ဂျပန်ယန်းငွေ6841.05 မြန်မာကျပ်ငွေ
ယနေ့ 10 ဂျပန်ယန်းငွေ 136.82 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ငွေကြေး converter ကိုယခု 342.05 မြန်မာကျပ်ငွေ 25 ဂျပန်ယန်းငွေ ။ သငျသညျ 684.10 မြန်မာကျပ်ငွေ ရှိပါက, ထို့နောက် မြန်မာ ၌သင်တို့ကို 50 ဂျပန်ယန်းငွေ ။ ပြောင်း 100 ဂျပန်ယန်းငွေ 1 368.21 မြန်မာကျပ်ငွေ များမှာ လိုအပ်သည်။ သငျသညျ3420.52 မြန်မာကျပ်ငွေ ဘို့ 250 ဂျပန်ယန်းငွေ ဖလှယ်နိုင်ပါတယ် ။ ယနေ့6841.05 မြန်မာကျပ်ငွေ 500 ဂျပန်ယန်းငွေ ။
ဂျပန်ယန်းငွေ သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲလှယ်နှုန်း
ဂျပန်ယန်းငွေ သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ယနေ့အချိန်တွင် 06 ဇူလိုင်လ 2022
06.07.2022 13.261038 -0.02164 ↓
05.07.2022 13.282678 -0.295518 ↓
04.07.2022 13.578196 0.692566 ↑
03.07.2022 12.88563 0.360719 ↑
02.07.2022 12.524912 -0.440004 ↓
ယနေ့တွင် 500 JPY = 13.261038 MMK ။ ဂျပန်ယန်းငွေ မြန်မာကျပ်ငွေ မှ5ဇူလိုင်လ 2022 - on 13.282678 မြန်မာကျပ်ငွေ ။4ဇူလိုင်လ 2022 အပေါ် မြန်မာကျပ်ငွေ မှ ဂျပန်ယန်းငွေ 13.578196 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ထဲမှာအများဆုံး JPY / MMK နှုန်း 04.07.2022 ။2ဇူလိုင်လ 2022 အပေါ် မြန်မာကျပ်ငွေ မှ ဂျပန်ယန်းငွေ 12.524912 မြန်မာကျပ်ငွေ ။
ဂျပန်ယန်းငွေ သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲနှုန်းသမိုင်း
ဂျပန်ယန်းငွေ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေကြေးသင်္ကေတများနှင့်နိုင်ငံများ
ဂျပန်ယန်းငွေ ငွေကြေးသင်္ကေတ, ဂျပန်ယန်းငွေ ပိုက်ဆံနိမိတ်လက္ခဏာ: ¥. ဂျပန်ယန်းငွေ ပြည်နယ်: ဂျပန်. ဂျပန်ယန်းငွေ ငွေကြေးကုဒ် JPY. ဂျပန်ယန်းငွေ အကြွေစေ့: sen.